Ibhixene esizweni sakwaMathenjwa – Ubukhosi
Home/ Ubukhosi noMhlaba/Ibhixene esizweni sakwaMathenjwa
Ubukhosi News November 26, 2015
Ibamba buKhosi uNdlunkulu uDoreen Mathenjwa
SEKUVELE ezinye izinsolo ezishaqisayo ezithinta ummeli odumile KwaZulu-Natal okuthiwa uhlangene nezikhulu zokubuyiswa komhlaba eMgungundlovu ukuqola imiphakathi izindawo zawo nemali yezinxephezelo.
Lokhu kulandela ngemuva kokuthi iNkosi yesizwe saseManyiseni eNgwavuma, uNdlunkulu uDoreen Mathenjwa ebhadame ukuthi ummeli uNjabulo Maseko nabangani bakhe sebezakhele iTrust yabo yomgunyathi besebenzisa igama letrust yesizwe, Usuthu Gorge Conservation Trust (UGCT) bayigcwalisa ngamalungu abo amasha ekubeni kusekhona amalungu amadala akhethwa ngumphakathi.
UMnu uMaseko uvumile ukuthi ucelwe ngumphakathi njengommeli ukuba ayobabhalisela itrust yabo entsha eHhovisi lakwaMaster of the High Court.
Ngokusho kwebambabukhosi lesizwe saseManyiseni, uNdlunkulu uDoreen Mathenjwa uthi ummeli uMaseko namalungu athile omphakathi sebemgasele iziqubu bezomphoqa ngenkani ukuba abasayindele amaphepha aseHhovisi le-Ingonyama Trust Board (ITB) ukuze bakwazi ukuqashisa ngeNdumo Game Reserve enkampanini efuna ukuvula imayini yamalahle.
“Bafuna ukuguqula isiqiwu sethu indawo yemayini yamalahle,’’ kusho uNdlunkulu uMathenjwa.
UNdlunkulu uMathenjwa uthi usezidonsele amanzi ngomsele kuMnu uMaseko neqembu lakhe ngokwenqaba ukusayinda la maphepha e-ITB.
“Manje sebehamba bevukuza umphakathi ukuba ngiketulwe esikhundleni ngoba bethi ngivimbe nentuthuko njengoba ngingafuni ukubasayindela lamaphepha e-ITB agunyaza ukudedelwa komhlaba kwabemayini,’’ kusho uNdlunkulu uMathenjwa.
Le ncwadi ye-ITB abafuna isayindwe ingoyowezi-2014 kodwa isixikizwe ngepeni yashintshwa yaba ngeyowezi-2015.
UNdlunkulu uMathenjwa uqhuba uthi uyaxakeka ukuthi la madoda ayithole kanjani incwadi evela eHhovisi likaMaster of the High Court eqinisekisa ukuthi ikomiti le-UGCT yoMaseko lisemthethweni ekubeni endala ingakaphelelwa yisikhathi.
IBAYEDE inayo ikhophi ye-UGCT yamalungu amasha kanye naleyo enamalungu amadala. Okuphawulekayo ukuthi le ye-UGCT enamalungu amadala inaneDeed of Trust esayindwe nguNdlunkulu uMathenjwa.
“Okuqinisekisa ukuthi le trust yoMaseko ngeyomgunyathi ukuthi ngisho nenombolo yetrust yabo iyafana neyethu njengoba ingunombolo-IT020580/2014(N). Umahluko ukuthi eyethu inesigxivizo sakwaMaster of the High Court sangomhla zizi-4 kuLwezi 2014 ekubeni eyabo inesigxivizo sango mhla zili-11 kuMfumfu 2015. Zombili lezi zincwadi zinesiginesha yomuntu oyedwa,’’ kuqhuba uNdlunkulu uMathenjwa.
UNdlunkulu uMathenjwa uthi ngenxa yokwenqaba kwakhe ukusayinda ifomu le-ITB yena namalungu e-UGCT endala sebethola izinsongo zokwenzakaliswa.
“Ubhongoza wayo yonke le nto nguMnu uMaseko. Nguye ogovuza umphakathi namalungu athile omndeni wami ukuba ngiketulwe. Ufuna ukudla isiqiwu sethu bese esidayisela abezimayini. Ngeke ngivume ukuba kuphendulwe isiqiwu imayini,’’ kuphetha uNdlunkulu uMathenjwa.
Usihlalo we-UGCT endala, uMfundisi uMzweleni Mathenjwa ongusihlalo we-UGCT endala futhi ongunobhala wegatsha le-ANC naye uhambe emazwini kaNdlunkulu uMathenjwa ethi bonke sebelala obenyoni ngenxa yezinsongo zokwenzakaliswa.
UMfu uMathenjwa uthi namanje basadidekile ukuthi iHhovisi leMaster of the High Court libanikeze kanjani incwadi egunyaza ukuthi sebenetrust entsha ekubeni kusekhona endala.
“Lokhu kuqinisekisa ukuthi mkhulu umkhonyovu okhona eHhovisi lezomhlaba kanye naseHhovisi likaMaster of the High Court,’’ kusho uMfu uMathenjwa.
UMfu uMathenjwa ugxeke uMnu uMaseko ngokuthi usebenzisa kabi isikhundla sakhe sokuba ngummeli. “Lo muntu uluhlupho endaweni futhi ungusomathuba. Usebenzisa kabi isikhundla sakhe sokuba ngummeli nokuba yilungu le-ANC. Kumanje ummeli uMaseko usexove ngisho noBukhosi bakwaMathenjwa njengoba ehamba evukuza amalungu omphakathi nawomndeni ukuba kuvukelwe uNdlunkulu. Uthi ufuna kubambe esikhundleni indodana endala yomfowabo womyeni kaNdlunkulu. Phela le ndoda yakwaMaseko iyasatshwa lapha,’’ kuqhuba uMfu uMathenjwa.
UMfu Mathenjwa uthi ummeli Maseko ulwisana nobuholi besifunda ngoba ethi buhambisana nobuholi obusha besifundazwe.
UMnu Maseko uvumile ukuthi utheleke namalungu kaANC emhlanganweni wesifunda ngoMgqibelo eMkhuze.
UMnu Maseko uzuchithe njengamampunge izinsolo zokuthi ugovuza umphakathi ukuba uvukele ibamba bukhosi ngoba lingafuni ukubasayindela amaphepha okuqashisa ngomhlaba.
“Angazi ukuthi bangifaka kanjani kulolu daba lobukhosi kanye nelokuvulwa kwemayini. Vele uNdlunkulu akasafunwa nawumndeni wakhe ngoba bagcwele inkohlakalo benamalungu athile omkhandlu wakhe kanye namalungu etrust endala. Manje uNdlunkulu noMfu Mzweleni Mathenjwa babheca mina ngoba bebulawa wubuhlungu bezinhliziyo ngoba bekhishwa ezikhundleni,’’ kuqhuba uMnu uMaseko.
“Umphakathi ukhathele yinkohlakalo yabo. Manje umphakathi kanye namalungu ka-ANC bethemba mina njengomuntu ofundile nelungu lomphakathi eliqotho. Yingakho uma umphakathi unezinkinga ubalekela kimi uzocela izeluleko,’’ kuqhuba uMnu Maseko.
Uhlu lwetrust endala lumi kanje: usihlalo nguMzweleni Mathenjwa, uNkimane Mthembu, uMusawenkosi Thwala, uMasuku Jobe Mamba, uBongiwe Mathenjwa, uThokozile Ndlazi no-Eliot Nkomonde.
Olwetrust entsha lona lumi kanje: usihlalo wayo nguPhilip Ommie Mathenjwa, uMakhula Mathenjwa, uNonhlanhla Khumalo, uZokwenzani Dladla, uMbongeni Ngwenya, uNgimphiwe Mbuyisa kanye noNtokozo Mbhamali.
Yize uMnu uMaseko ephika ukuthi uyazana nendaba yokuqashiswa ngomhlaba wesiqiwu iNdumo Game Reserve kwabemayini, uvumile ukuthi ubengusihlalo womhlangano okukhethwe kuwo amalungu etrust amasha.
Usihlalo wetrust entsha, uMnu u-Ommie Mathenjwa ukuqinisekisile ukuthi inkosi ayifuni ukubasayinela incwadi ye-ITB yokuqashisela abemayini ngomhlaba oyisiqiwu.
“UNdlunkulu uMathenjwa akafuni ukusisayindela le fomu ye-ITB ukuze sikwazi ukuqashisa ngalo mhlaba kwabemayini yamalahle. UNdlunkulu uMathenjwa ucabanga ukuthi sifuna ukunikezela ngalo mhlaba wesiqiwu kummeli uMaseko,’’ kusho uMnu uMathenjwa.
Ngokwamaphepha inkampani yabameli iMaseko Mbatha Attorneys iyiDevelopment Consultant yoSuthu Gorge Conservation Trust (UGCT).
“Yebo yiqiniso ukuthi ummeli uMaseko uyaselekelela ekutheni sikhiphe esikhundleni uNdlunkulu uMathenjwa ukuze siqoke elinye ibambabukhosi,’’ kusho uMnu uKhula Mathenjwa.